Intetho yasimahla ayikhuseli igama lakho | Martech Zone
NgoLwesihlanu, ngoJanuwari 27, 2012 NgoLwesihlanu, ngoJanuwari 27, 2012 Douglas Karr
USam Montgomery ngumfundi we Martech Zone kwaye waqhagamshelana nam malunga nebali leetalente zebhola ekhatywayo egama linguYuri Wright. U-Yuri wayeqeshwa nguRhulumente wase-Michigan… de abanye abantu bafunde iitweets zakhe. Inkqubo ye- iitweets ziboniswa kwiMidlalo yeNgxoxo kwaye ayikhuselekanga emsebenzini (NSFW)… yazi nje ukuba zintle kakhulu.
U-Yuri Wright, inkwenkwezi ye-4 ye-CB evela eNew Jersey, wayekhe waya eMichigan kwiklasi ka-2012. Kwangoko kule nyanga, abaqeqeshi baseMichigan bajonga nzulu kwithemba emva kokuba i-alumnus echaphazelekayo ithumele ii-tweets zesikolo ezithunyelwe ngu-Yuri kwi-akhawunti yakhe ye-Twitter ezazingamkelekanga ngokobuhlanga nangokwesondo.
Ndithethile kwiiyunivesithi ezininzi malunga noku ndaza ndaxelela abafundi ukuba yonke into Barekhoda kumajelo asekuhlaleni namhlanje yinto eya kuchaphazela amathuba abo emisebenzi phantsi kwendlela. Abanye bayothuka, abaninzi bacinga ukuba ayilunganga… kodwa inyani yile Ngubani Abaqeshi baseMichigan babonakalisa ngokuthe ngqo eyunivesithi.
UMichigan ukhethe isenzo esifanelekileyo esisekwe kwimeko. Ndiyakholelwa ukuba uMnu. Wright ufunde isifundo esinzima, naye. Ndiqinisekile ukuba wayethetha nje ukukora amanqaku kunye nabalandeli bakhe kunye nokuhleka okumbalwa. Ukuba ebengumntu ohlekisayo, ebezakulunga… kodwa ekubeni eyi-University ngokubonakala okuphezulu, yile yenzekileyo.
Yonke into oyenzayo kwi-Intanethi ineziphumo. Kungenxa yoko le nto kungekho nto injalo Kuhleni… Ngaphezulu ukungafani. Andiphumi kwindlela yam yokukhubekisa abantu kwi-Intanethi, kodwa nditsho ndiphulukane nabalandeli amaxesha ngamaxesha abangakhathaliyo uburharha bam.
Xa ndiyithumela into enobungozi, andizukubeka esichengeni umlandeli, ndibeka emngciphekweni abaxhasi bebhlog yam kunye nabaxumi Iarhente yentengiso engenayo. Akukho ndlela ndinokuba selubala ngokupheleleyo! Ndiyazithanda iziqhulo ezingenamibala ... kokukhona kungachanekanga kwezopolitiko, kokukhona ndiya ndihleka. Luluvo lwam nje, kodwa inyani yokuba wonke umntu ukhululekile kule mihla yoyikeka- ngakumbi njengoko ubomi bethu budlala kwi-Intanethi.
Ndiyakwazi ukuhlala nenyani yokuba ndilahlekelwe ngumlandeli kwaye, mhlawumbi ngumfundi, kodwa yandikhathaza. Yandikhathaza into yokuba kukho umntu apha phandle endicinga ukuba ndingumntu ongenguye. Kodwa kufuneka ndibeke emva kwam ndiqhubeke. Andifezekanga, ndiza kutyibilika kube kanye. Kwaye ... abanye abantu ngokulula abazukundithanda. Yinyani nje elula.
Kodwa ndi lucky… Ikhondo lam lomsebenzi aliqali. Andingomntu ugayayo okanye umqeshwa wakubani. Andikwazi ukucinga ukuba ndingaphi ebomini ukuba kukho iifoto ze-Facebook, i-Twitter-okanye ngakumbi-i-Youtube xa ndandiselula. bendi ngokupheleleyo ayilawuleki. Ndingathi ndenze umsebenzi onzima kwenye indawo!
Ngaba wayelifanele ithuba lesibini? Ewe… sonke siyakwenza oko. Ngombulelo wafumana enye xa uCU wamphakamisa:
Ndenze impazamo enkulu, ”utshilo uWright. “Ngokuqinisekileyo ndifunde isifundo esibalulekileyo, kwaye andithembisi into enjalo ukuba iyakuze iphinde yenzeke. Wonke umntu ondaziyo uyazi ukuba ayinguye umlingiswa wam oyinyaniso okanye ukuba ndingubani kanye kanye. Andizuhlala apha ndizame ukuzithethelela ngalento ndiyenzileyo. Ndizokuba yindoda futhi ndithi ndiphazamile kwaye ndafunda kuyo.
Ngubani owaziyo… ngenye imini ungadinga elinye ithuba, nawe. Masingayenzi into ephambeneyo apha, bantu bakuthi! Abantu babukele… kwaye uninzi alunangqondo.
tags: footballukugaywa kwebholaMichiganTwitterYuri Wright
I-27% yabarhwebi ayinazicwangciso zethebhulethi… okwangoku!